विचार / विश्लेषण नाकाबन्दीबारे प्रश्न गर्दा यसरी कुरा टारे मुखर्जीले 'भ्रमण मित्रताको मिसन हो'
Thursday,3Nov, 2016 11:47 AM
काठमाडौं, १८ कात्तिक–भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले नाकाबन्दीबारे सोधिएको प्रश्नको जवाफ कूटनीतिक ढंगले दिएर पन्छिएका छन् । कान्तिपुर दैनिकका सम्पादक सुधीर शर्मा र काठमाडौं पोष्टका सम्पादक अखिलेश उपाध्यायले अन्तरवार्ता लिने क्रममा मुखर्जीसँग नाकाबन्दीबारे सोधेका थिए । तर मुखर्जीले त्यसको जवाफ दिन चाहेनन् र कुरा मोडे ।
उनलाई सोधिएको थियो, 'नेपालको संविधानप्रति आफ्नो असन्तुष्टि प्रकट गर्न भारतले अलि बढी नै गरेको, खासगरी साढे चार महिना लामो अघोषित सीमा नाकाबन्दी लगाएको विषयलाई लिएर नेपालभित्र र बाहिर पनि भारतको निकै आलोचना भयो नि ?
त्यसको जवाफ मुखर्जीले यसरी दिए -'हाम्रो खुला सिमाना भएका कारण नेपालभित्र भएका घटनाक्रमको असर सीमापारि पनि पर्न सक्छ । तर के नबिर्सौं भने हाम्रो सम्बन्ध र सहकार्य पृथक किसिमको हो, जुन दुवै पक्षका जनताको सघन सम्पर्कद्वारा निर्देशित छ । भारतले सधैं नेपालको शान्ति, स्थायित्व र विकासमा चासो लिँदै आएको छ । यसकारण निकट मित्रका रूपमा हामी दिगो शान्ति र स्थायित्वका लागि गरिने हरेक प्रयासको स्वागत गर्छौं । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतर्फ नेपालको यात्रामा भारतको सधैं सहयोग र शुभेच्छा रहन्छ ।
पत्रकार शर्मा र उपाध्यायले त्यहि विषयमा अर्को प्रश्न गरे -'धेरैको बुझाइमा नाकाबन्दीले नेपाली समाजलाई धु्रवीकृत गर्ने र भारतविरोधी भावना बढाउने काममात्रै गर्‍यो । भारतको राष्ट्रप्रमुखका रूपमा तपाईंले यो आलोचनाको कसरी जवाफ दिनुहुन्छ ?
यस प्रश्नको पनि मुखर्जीले कुटनितीक ढंगले जवाफ दिए । उनको जवाफ यस्तो छ :
'भारतको 'छिमेक प्राथमिकता' नीतिको केन्द्रीय भाव वा दर्शन भनेको निकट सम्बन्ध र समृद्धिमा सहभागिता हो भन्ने मलाई लाग्छ । हाम्रो नेपालसँगको सम्बन्ध दुई देशको दीर्घकालीन हितमा आधारित हुनेछ । नेपाल र भारतले विकाश, शान्ति, आर्थिक समृद्धि र जनताका भलाइका लागि सँगै मिलेर काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो दृढ विश्वास छ ।’